सांसदको बजेट कोभिड–१९ विरुद्ध किन प्रयोग नगर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
संसदमा सांसद, फाइल फोटो ।
काठमाडौंः छिमेकी भारतले दुई दिनअघि कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिन ‘सांसद विकास कोष’ दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको एक वर्षको तलब, भत्ता र पेन्सन ३० प्रतिशत कटौती गर्‍यो ।
याे पनि पढ्नुस भूकम्पको ऋण तिर्दै चीनमा नेपाली विद्यार्थी
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सांसदहरूमार्फत खर्चिने कार्यक्रमको रकम कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने बताए । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि यो कार्यक्रममा खर्च हुन बाँकी रकम तत्काल रकमान्तर गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रण, यसका कारण सिर्जित समस्या समाधान, औषधि उपचार र राहतमा लगाउनुपर्ने बताए ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४ हजार नाघ्यो, कुन देशमा कति संक्रमित? (सूचीसहित)
नेकपाका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सरकारले आवश्यकता महसुस गरे जस्तोसुकै रकम पनि खर्च गर्न सक्ने बताए । ‘अहिले यस्तो रकम कोभिड–१९ मा नियन्त्रणमा खर्च गर्ने सन्दर्भमा सरकारको धारणा नआएकाले म यसै हो भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
ट्याग्स: कोभिड–१९, सांसद